WARBIXIN: 3 Meelood Oo Ay Ku Kala Badin Karaan Kooxaha Liverpool & Man United Kulankooda Caawa. – Kooxda.com
HomePremier LeagueWARBIXIN: 3 Meelood Oo Ay Ku Kala Badin Karaan Kooxaha Liverpool & Man United Kulankooda Caawa.
January 17, 2021 Abdiwali Adan Jamac Premier League, Wararka Maanta, Warbixino 0
Waxa ay saacado inaga xigaan kulanka adag ee dhexmari doona kooxaha Liverpool iyo Man United kulan ka tirsan todobaadkii 19-aad ee horyaalka premier League.
Labada kooxood ee sida weyn u xafiiltama ayaa kala sareeya 3 dhibcood iyada oo Man United hogaaninayso horyaalka premier League.
3-da dhibcood ee kulanka ayaa muhiim u ah labada kooxood waxana ay koox walba u dagaalami doontaa sidii ay garoonka ugala bixi lahayd 3-da dhicbood oo dhamaystiran.
Hadaba waxa aan warbixintan ku soo bandhigi doonaa 3 Meelood oo ay labada kooxood ku kala badin karaan kulanka caawa ee prmeier League.
Bruno Fernandes ayaa Man United ka dhigay koox awood leh isaga oo door muhiim ah ka qaatay qaab ciyaareedka kooxda tan ilaa markii uu ku soo biiray kooxda.
Xiddiga reer Portugal ayaa ah hubka ay ku socoto Man United isaga oo gool dhalinaya ama caawin samaynaya kulanka waliba aan seegin midkood labadaas arin ee aan kor ku xusnay inta uu kulanku socod.
Tababare Jurgen Klopp ayaa kulanka kabtankiisa Jordan Henderson u adeegsan doona khal-khal galinta khadka dhexe ee Man United iyo waliba in uu joojiyo xiddigii hore ee Sporting Lisbon hadii ay doonayso in ay Liverpool wax kala baxdo kulanka.
Jordan Henderson ayaa dhankiisa laf dhabar u ah kooxda Liverpool isaga oo kooxdiisa ku caawiyo orodkiisa badan iyo waliba in uuna marna ka daalin sidii uu u joojin lahaa xiddigaha weerarka ku ah kooxdiisa.
Mohamed Salah v Eric Bailly:
Xiddiga ugu goolasha badan Premier League ee Mohamed Salah ayaa halista ugu badan ku ah kooxda Man United iyada oo Salah kaligiis go’aamin karo kulanka.
Mohamed Salah ayaa ka soomanaa goolasha kulamadii ugu dambeeyay laakiin Marna lama dhayalsan karo xiddiga reer Masar maadama uu si lama filaan ah u go’aamin karo kulanka.
Salah ayaa wajahaya xiddiga ay isku qaarada ka soo jeedaan ee Eric Bailly kaas oo ku dhibaatooday taam ahaanshaha sanadihii ugu dambeeyay laakiin haatan qaab ciyaareed fiican ku jira.
Eric Bailly ayaa kulamadii ugu dambeeyay naftiisa u horay kooxda Man United isaga oo sameeyay badbaadino cajiib ah waliba ayna United guuldaro soo gaadhin 6-dii kulan ee ugu dambeeyay ee uu Eric Bailly u ciyaaray Kooxda.
Fabinho v Marcus Rashford:
Kadib markii ay dhaawacyo ku habsadeen Jurgen Klopp ayaa daafaca dhexe ka ciyaarsiin doona xiddiga khadka dhexe ee Fabinho kaas oo shaqo fiican qabtay.
Maqnaanshaha Virgil Van Dijk iyo Joe Gomez ayuu Fabinho ilowsiiyay taageerayaasha Reds inkasta oo uu Joel Matip mar walba ka dhaawacmo kooxda.
Fabinho ayaa markan looga baahanyahay in uu qabto shaqo dheeraad ah si uu u joojiyo xiddiga orodka badan ee weerarka uga ciyaara Man United ee Marcus Rashford.
Rashford ayaa caado ka dhigtay in uu gool ka dhaliyo Liverpool isaga oo la saaxiibay goolka Liverpool waliba soo taabtay 3-dii kulan ee ugu dambeeyay.
Sidaas darteed Fabinho ayaa looga baahanyahay dadaal dheeraad ah si uu Rashford uga hor istaago goolkiisa inta uu socdo kulanku 90-ka daqiiqo.
Sii Akhriso: U Gaar Ah Dumarka: Ma Doonaysaa In Uuna Gacaliyahaag Waligaa Kaa Tagin, 3-dan Arin Ayaad Ku Dagi Kartaa Qalbigiisa.
Fursadaha Lionel Messi Ee Ku Bilaabashada Kulanka Athletic Bilbao Oo La Ogaaday.